ဟဒီးဆ်: အထွတ်မြတ်ဆုံး ဇိက်ရ်တော်သည် လာအိလာဟ အိလ္လလ္လာဟ် ပင်ဖြစ်သည်။ - တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော် ဘာသာပြန် စွယ်စုံကျမ်း
ဟဒီးဆ်: အထွတ်မြတ်ဆုံး ဇိက်ရ်တော်သည် လာအိလာဟ အိလ္လလ္လာဟ် ပင်ဖြစ်သည်။
အမျိုးအစား: ထွတ်မြတ်မှုများနှင့် အာဒါဗ်စည်းကမ်းများ။ . ဒုအာ၊ ဇိကိရ်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဖိကဟ်။ . အမြဲတမ်းရွတ်ဖတ်နိုင်သည့် ဇိက်ရ်တော်များ။ .
[حسن] - [رواه الترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه]
ဂျာဗိရ်(ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟု)က ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရစူလ်တမန်တော် (ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစ္စလာမ်) မိန့်တော်မူသည်ကို ကြားသိခဲ့ရသည်။ အထွတ်မြတ်ဆုံး ဇိက်ရ်တော်သည် လာအိလာဟ အိလ္လလ္လာဟ် ပင်ဖြစ်သည်။
တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)က ကျွန်တော်တို့အား အသိပေးမိန့်ကြားတော်မူသည်မှာ ဧကန်အမှန်ပင် အထွတ်မြတ်ဆုံး ဇိက်ရ်တော်သည် (လာအိလာဟအိလ္လလ္လာဟ်) ဖြစ်သည်။ အခြား ဟဒီးဆ်တော် တစ်ရပ်တွင် လာရှိသည်မှာ ငါကိုယ်တော်နှင့် ငါ့အလျင် ရှိခဲ့ကြသော နဗီတမန်တော်များ ပြောကြားခဲ့သည့် အရာများအနက်အထွတ်မြတ်ဆုံးမှာ (လာအိလာဟ အိလ္လလ္လာဟု ဝဟ်ဒဟူ လာရှရီးကလဟူ)ဖြစ်သည်။ အဓိပ္ပာယ်မှာ- တစ်ပါးတည်းတည်ရှိသောမူသော ဖက်စပ်ယှဥ်တွဲမှုမှ ကင်းစင်တော်မူသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မှအပ အခြားခဝပ်ကိုးကွယ်ခြင်းခံထိုက်တော်မူသော အရှင်မရှိ။ ဤကလိမဟ်တော်သည် အလွန်ပင်ကြီးကျယ်လှကြောင်း သံသယဖြစ်ရန် မလိုအပ်ပေ။ ထိုကလိမဟ်တော်ကြောင့်ပင် မြေပထဝီနှင့် မိုးကောင်းကင်များ ရပ်တည်လျက်ရှိသည်။ ထို့ပြင် ယင်းကလိမဟ်တော် အတွက်ကြောင့်ပင် အဖန်ဆင်းခံအားလုံး ဖန်ဆင်းခြင်းခံရသည်။ ထိုကလိမဟ်တော်ကို အကြောင်းပြု၍ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် မိမိ၏ ရစူလ်တမန်တော်များကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။ မိမိ၏ ကျမ်းဂန်များကိုလည်း ချပေးပြီး မိမိ၏ ရှရီအသ် တရားလမ်းစဥ်များကိုလည်း သတ်မှတ်ပြဌာန်းခဲ့သည်။ ယင်းကလိမဟ်အတွက်ကြောင့် (မီဇာန်) ချိန်ခွင်အား သတ်မှတ်ထားသည်။ စာရင်းအင်း စစ်ဆေးမေးမြန်းရန် စာအုပ်များထားရှိခြင်းနှင့် ဂျဟန္နမ်နှင့် ဂျန္နသ်၏ဈေးကိုလည်း တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ထိုကလိမဟ်တော်၏ အဓိပ္ပါယ်သည် (အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မှအပ အခြားခဝပ်ကိုးကွယ်ခြင်းခံထိုက်တော်မူသော အရှင်မရှိ) ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ထိုကလိမဟ်တော်တွင် စည်းကမ်းချက် ခုနှစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာ (၁)ကလိမဟ်တော်၏ အဓိပ္ပါယ်ကို သိနားလည်ရမည်။ (၂)ယုံကြည်မှုပြည့်ဝစွာဖြင့် ရွတ်ဖတ်ရမည်။ (၃)ကလိမဟ်တော်၏ တောင်းဆိုချက်အားလုံးကို လက်ခံသဘောတူရမည်။ (၄)ကလိမဟ်တော်၏ တောင်းဆိုချက်အားလုံးကို ကျိုးနွံနာခံလိုက်နာရမည်။ (၅)ကလိမဟ်တော်အား စိတ်နှလုံးသားမှ ထောက်ခံရမည်။ (၆)ရှိရ်က်မှ ကင်းစင်ကာ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ နှစ်သက်မှုကိုရယူရန် ရည်ရွယ်၍ ကလိမဟ်တော်ကို ရွတ်ဖတ်ရမည်။ (၇)ကလိမဟ်တော်ကို ချစ်မြတ်နိုးရမည်။ ၎င်းကလိမဟ်တော်နှင့် ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာဦးအစမှ ကမ္ဘာပျက်မည့်နေ့အထိ ပေါက်ဖွားလာမည့် လူသားများအားလုံး စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းခံရပေမည်။ ကိယာမသ်နေ့၌ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရှေ့တော်မှောက်တွင် (၁)အသင်တို့အဘယ်အရာကို ခဝပ်ကိုးကွယ်ခဲ့ကြသနည်း။ (၂)စေလွှတ်ခြင်းခံရသော ရစူလ်တမန်တော်(အလိုင်ဟိစ္စလာမ်)များအား မည်သို့အဖြေပေးခဲ့ကြသနည်း။ ဟူသည့် မေးခွန်းနှစ်ခုအား မေးမြန်းခြင်းမခံရသရွေ့ လူသား၏ ခြေနှစ်ဖက်စလုံး ရွှေ့နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ပထမမေးခွန်း၏ အဖြေအား၊ (လာအိလာဟအိလ္လလ္လာဟ်)ကို နားလည်သဘောပေါက်ခြင်း၊ ဝန်ခံထွက်ဆိုခြင်းနှင့် ကလိမဟ်တော်၏ တောင်းဆိုမှုအတိုင်း လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်သာ ဖြေဆိုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယမေးခွန်း၏ အဖြေအား၊ (မုဟမ္မဒွရ်ရစူလွလ္လာဟ်)ကို နားလည်သဘောပေါက်ခြင်း၊ ဝန်ခံထွက်ဆိုခြင်း၊ နာခံခြင်း၊ လိုက်နာခြင်းဖြင့်သာ ဖြေဆိုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)က မိန့်တော်မူသည်မှာ၊ အစ္စလာမ်သာသနာသည် အရာငါးခုအပေါ်တွင် တည်ဆောက်ခြင်းခံရသည်။ (အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မှအပ အခြားခဝပ်ကိုးကွယ်ခံထိုက်သော အရှင်မရှိကြောင်းနှင့် မုဟမ္မဒ်သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရစူလ်တမန်တော် ဖြစ်ကြောင်းသက်သေခံခြင်း...)ဖြစ်သည်။
ကလိမဟ်သောင်ဟီးဒ် (လာအိလာဟအိလ္လလ္လာဟ်)သည် အမြတ်ဆုံးစကားဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော ထိုကလိမဟ်တော်သည် တစ်ပါးတည်းသော အရှင်အား ခဝပ်ကိုးကွယ်မှုကို အတည်ပြုထားပြီး ဖက်စပ်ယှဉ်တွဲကိုးကွယ်သူများကို ငြင်းပယ်ထားသည်။ ၎င်းသည် နဗီတမန်တော်များ ပြောဆိုခဲ့သော စကားများအနက် အထွတ်မြတ်ဆုံး စကားလည်းဖြစ်သည်။ နဗီရစူလ်တမန်တော်များသည် ယင်းကလိမဟ်အတွက်ကြောင့် စေလွှတ်ခြင်းခံရပြီး ကလိမဟ်တော်၏ အလံအောက်၌ပင် စစ်တိုက်ခဲ့ကြသည်။ ထိုလမ်းတော်၌ပင် ရှဟီးဒ်ဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းကလိမဟ်တော်သည် ဂျန္နသ်၏ သော့တံနှင့် ဂျဟန္နမ်ငရဲမှ လွတ်မြောက်စေမည့် အရာလည်းဖြစ်သည်။
ထွတ်မြတ်မှုများနှင့် အာဒါဗ်စည်းကမ်းများ။ . ဒုအာ၊ ဇိကိရ်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဖိကဟ်။ . အမြဲတမ်းရွတ်ဖတ်နိုင်သည့် ဇိက်ရ်တော်များ။ .
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် အနှစ်သက်ဆုံး စကားရပ်လေးခုရှိသည်။ ၎င်းတို့အနက် မည်သည့်စကားရပ်ဖြင့် စတင်သည်ဖြစ်စေ သင့်အားဆိုးကျိုးဖြစ်စေမည် မဟုတ်ပေ။၎င်းတို့မှာ စွဗ်ဟာနလ္လာဟ်၊ အလ်ဟမ်ဒုလိလ္လာဟ်၊ လာအိလာဟ အိလ္လလ္လာဟ်၊ အလ္လာဟု အက္ကဗရ် ဖြစ်သည်။